Madaxweyne Siilaanyo Oo Ka Hadlay Mashruuca Sahaminta Shidaalka, Xaaladda Abaarta, Dib U Dahaca Doorashooyinka Iyo Arrimo Kale | #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Madaxweyne Siilaanyo Oo Ka Hadlay Mashruuca Sahaminta Shidaalka, Xaaladda Abaarta, Dib U Dahaca Doorashooyinka Iyo Arrimo Kale
Burco(ANN)-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Axmed Maxamed Silaanyo waxa uu subaxnimadii hore ee saaka ka jarmaaday Magaalada Berbera, isaga iyo weftigii uu hoggaaminayey ee maalmahan ku sugnaa gobolka Saaxil, waxaanay gaadheen deegaamada laga wado sahaminta Shidaalka Ku Duugan qaybo ka mida Dhulka Somaliland.
Madaxweyne Siilaanyo oo ka hadlayay ariimaha Khayraadka, wuxuu yidhi, “Khayraadka iyo nimcooyinka kala duduwan ee EEBE aadanaha u qaybiyey, waxay ka mid yihiin, ayaanka iyo nasiibka la is dheer yahay. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah, in aynu ogaanno wixii qaddarka ALLE aynu qayb u helnay, iyo wixii qaniimad dhulkeenu hodan ku yahay. Haddaba, si aynu ugu gungaadhno arrintan, waxaa la inooga baahan yahay in aynu la nimaadno tallo adag, tawfiiq wanaagsan iyo tabaabushe weyn.
Siyaasadda qarankan aan ku hagayo, waxaa bud-dhig u ah, in la hirgeliyo horumar ballaadhan iyo in la yagleelo nolol dadku dugsan karaan. Waxaan shacbigayga ku leeyahay, hal ku dhigyadii uu geel-jiruhu ku heesi jiray, “Ragna dhuuni buu kuu dhex joogaa, ragna dhaqashuu kuugu dhaadhacay”.
“Waxaannu nahay xukuumad bisil, oo ay ku duugan tahay dulqaad, dad-wad, waayo-aragnimo iyo waayeelnimo. Sidaa darteed, waxaan soo dhoweynayaa dhaliilaha dhabta ah, ee runta ku dhisan, iyo toosinta wax lagu dhisayo ee maamulkayga loo jeedinayo. Aniga oo mabaadiida aan aaminsanahay ka duulaya, waxaan diyaar u ahay in aan saxo wixii qaladama, waxaana la yidhi “Qalad waa markii la qabto”. Dhinaca kale, waxaan ixtiraamayaa aragtiyaha ka soo horjeeda, hayaanka horumarka iyo higsiga himilada qarankan, aan hoggaankiisa hayo. Waxaannu xurmaynaynaa, xuquuda iyo xoriyaadka muwaadiniinta. Waxaan caddaynayaa in aanay jirin, isla markaana jiri doonin cid lagu cabudhiyo, ama lagu ciqaabayo fikirkiisa qof ahaaneed.
Madaxweyne Siilaanyo oo ka hadlayay dib-u-dhaca doorashooyinka, wuxuu yidhi,”Sida aynu la wada soconno, dib-u-dhac ayaa ku yimi Doorasahadii Madaxtooyada ee inoo qorshaysnayd 28/03/2017, oo ay maanta inaga xigto 2 cisho. Xaqiiqdii, aad ban uga xumahay, dib-u-dhaca ku yimi doorashooyinkii Madaxtooyada, Golaha Wakiillada iyo Goleyaasha Deegaanka. Madaxweyne ahaan, ma jiro cid iga jeclayd in doorashadu qabsoonto xilligii loogu talo galay. Xiiso iima hayo, xikmadna uma arko, in aan kursiga sii fadhiyo, wakhti ka baxsan muddo xileedkii la ii doortay, isla markaana muddo kordhin marba la ii sameeyo. Mansabkan aan qaranka u hayo, waxaan ku imi si maamus leh, waxaanan jecelahay in aan kaga tago si sharaf iyo xarrago leh. Waxaan shacbigayga u caddaynayaa, in arrintani aanay ku iman xeelad siyaasadeed, oo ay xukuumadaydu ka dambaysay. Dib u dhacan, waxaa keenay, abaarta ba’an ee inagu habsatay.